လူသားဆန်သော သစ္စာစွဲမြဲသော လမ်းကြောင်းဖြောင့်ရှင်းသော
အဖွား ၉၄နှစ်ပြည့်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့စာပါ။ ရေးစရာတွေက အကြောင်းဆိုက်တိုင်းပေါ်နေဆဲ၊ သူမရှိမှ သူ့ကိုပိုသတိရစရာတွေက ဒီ ၃ နှစ်အတွင်း ပိုထွက်ထွက်လာတော့ ရေးဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။ တိုင်းပြည်နဲ့ ဗမာလောကမှာ ဗူးတောင်းနစ်လို့ ဇောင်ခြမ်းပေါ်တဲ့အဖြစ်တွေက ပိုပိုဆိုးလာတော့ ငတေမာလုပ်ချင်တဲ့ စရိုက်စွဲနေတဲ့ လူမျိုးများဟာ တော်လှန်ရေး တော်လှန်ရေးနဲ့ လေလုံးကြီးရင်း ပျက်စီးတိမ်းပါးအုန်းမှာပဲ။ အခြေခံစရိုက်မှာကိုက ကူလီကူမာအကျင့်နဲ့ အချောင်စံချင်တဲ့လုပ်ပေါက်လေးတွေက ရိုးတွင်းထိလိုက်နေတော့ ပညာနဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ယူရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့က ဝေးနေပါအုံးမယ်။ ၁၉၅၀-၆၀ ကျော်များက ဒေါ်အမာရဲ့ စိန်ဗေဒါလက်သံပြင်းပြင်းနဲ့ အရေခြုံသမားတွေကို ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့ လက်စွမ်းမျိုး ခုခေတ်သတင်းသမားတွေမှာ မကျန်တော့ပါဘူး၊ ဦးစိန်ဝင်းနောက်ဆုံးပါပဲ။ နိုင်ငံရေး ကလော်စာနဲ့ ဝေဖန်စာရေးနည်း ဘာကွဲမှန်းမသိတဲ့လူမျိုးတွေ တွင်ကျယ်နေရင် ဒီလိုလူတွေရေးတဲ့စာတွေဖတ်နေရတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ နလံထူမှာ မဟုတ်သေးပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိတ်ဆွေရင်း ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်မှ ပက်ထရစ်ရှာ ဟားဗတ်ရေးသကဲ့သို့ ဒေါ်အမာကွယ်လွန်ခြင်းသည် ခေတ်ကြီးတခေတ်၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဖြင့် လူ့ဘောင်သစ်တရပ်ထူထောင်မည်ဟူသော စိတ်ကူးကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့သည့် မျိုးဆက်၏ နိဂုံးလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျိုးဆက်၏ အလုပ်အမွေကို ပီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်မည့် လူချွန်လူကောင်းများများ ပေါ်ထွက်လာပါစေ၊ မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ကြပါစေဟုသာ မျှော်လင့်ရပါ၏။
Filed under: anniversaries, family, history, literature	|6Comments
6 Responses to “လူသားဆန်သော သစ္စာစွဲမြဲသော လမ်းကြောင်းဖြောင့်ရှင်းသော”
1 Le. Win Khine on April 3, 2011 said:
2 bobolansin on April 3, 2011 said:
3ူလူဗိုလ် on April 6, 2011 said:
4 bobolansin on April 6, 2011 said:
5 Khine Khine on April 13, 2011 said:
I copied on my facebook for these words from above article.
6 ကိုမင်းမင်း on April 22, 2011 said: